true conditions /zu-ZA/tools-for-life/conditions/steps/survival-and-ethics.html read 5 21 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/conditions_zu_ZA.jpg Ukuziphatha neZimo
Uma uyazi incazelo yesibalo sokubonisa isimo yegrafu, ungathola isimo esifanele sanoma yimuphi umsebenzi. Futhi uma usazi isimo, uzokwazi ukuthi iyiphi ifomula ongayisebenzisa kuso. Ukusuka lapho, kulula ukulandela izinyathelo zefomula ngayinye nokukhulisa izibalo zokubonisa isimo zakho.
Ukuze uqonde izibalo kufanele wazi ngokuthambekela.
Igama ukuthambekela lisho indlela isibalo sokubonisa isimo esihamba ngayo ngokuvamile—phezulu, izinga noma phansi—ngaphezulu kwesikhathi, amasonto ambalwa noma izinyanga. Kuyindlela ejwayelekile yesibalo sokubonisa isimo samaphoyinti angaphezu kwelilodwa kugrafu.
Lapho useduze kakhulu nendawo lapho kusetshenzwa khona izibalo zokubonisa isimo, ungashintsha ngokushesha okwenzekayo kuzibalo zokubonisa isimo.
Isibonelo, uma ungumthengisi esitolo esikhulu sezincwadi futhi izibalo zakho zokubonisa isimo zikala inani lezincwadi ozithengisayo, kufanele ubuke izibalo zakho ihora ngehora.
Uma uyinhloko yomnyango esitolo sezincwadi, uphatha izibalo zakho nsuku zonke.
Kepha uma ungumnikazi wesitolo sonke sezincwadi, uzodinga izibalo zamasonto onke ukuphatha isitolo.
Futhi uma uphethe zonke izitolo ezidayisa izincwadi kulo lonke idolobha, khona-ke ubuzobheka ukuthembekela noma ukuqondiswa kwezibalo zokubonisa isimo ngaphezu kwamasonto, ukuze ukwazi ukuthatha izinyathelo ezifanele ezidingekayo ukuqondisa ukwanda kwazo.
Ukufunda ama-Stat Trends
Izibalo zokubonisa isimo sokuthambekela zingakhombisa noma yini kusuka Esimweni Sengozi kuya Esimweni Samandla, kuya ngokuqondiswa kwegrafu nokuthi yehla kangakanani.
Ngokuyibheka nje, kufanele ulinganise amaphuzu aphezulu namaphoyinti aphansi wezibalo zokubonisa isimo futhi ngale ndlela uzobona ukuqondisa okujwayelekile kwegrafu.
I-trend Engekhoyo ingabukeka kanje:
Lokhu kungaba okuthambekela Okungekho:
Lokhu kungaba i-trend Eyingozi:
Lokhu kungaba i-trend Ephuthumayo:
Njengoba ukwazi ukubona, akukubi kangako.
Lokhu futhi kungaba ukuthambekela Okuphuthumayo njengoba kuzowa—akukho okuhlala isikhathi eside.
Lokhu kungaba i-trend Ejwayelekile:
Noma yikuphi ukukhuphuka okuncane ngenhla kwezinga kuyinto Ejwayelekile.
Lokhu kungaba Umcebo we-trend:
Lokhu futhi kungaba Umcebo we-trend:
Igrafu ithambekele kakhulu Emcebweni.
Le grafu ikhombisa Umcebo uya Emandleni:
Umcebo we-trend ushaye ibanga elisha eliphezulu. Amandla i-trend Ejwayelekile egcinwa ebangeni eliphakeme kakhulu.